Pin foosto Feed Cold Rubber Extruder Machine - Shiinaha Qingdao Makiinado Joogto
Qasacadeysan Cuntada Processing Autoclave Verde Sterilizer M ...
Pin foosto Feed Cold Rubber Extruder Machine
PIN-foosto quudiyaan QABOW EXTRUDER caag 1 madaxdii extrusion kala duwan yihiin codsatay in ay extrude products.Available kala duwan caag nus-dhammeeyayna ay madaxa toosan, oo ah madaxa ku tuman, madaxa Cross, madaxa Strip Extrusion iyo madaxa strainer. 2 foosto wuxuu ka kooban yahay dhowr aag. In zong quudinta, boosaska loogu aarayo la duub dhanka shaqeeyaan si kor loogu qaado awoodda quudinta. In plastication iyo extrusion aagagga, tirada kala duwan ee biinanka waa foosto fitted.The waa qaab-dhismeedka biraha dual iyo caajisaan circumferenti ...
FOB Price: US $ 15000-80000
Min. Order Tirada: Mid ka mid ah Set
Supply Kartida: 20 dajisaa per Month
Port: Qingdao, CNF, CIF sidoo kale aqbalay
Shuruudaha Payment: T / T, L / C, Western Union
PIN-foosto quudiyaan QABOW EXTRUDER caag
1 madaxdii extrusion kala duwan yihiin codsatay in ay extrude products.Available kala duwan caag nus-dhammeeyayna ay madaxa toosan, oo ah madaxa ku tuman, madaxa Cross, madaxa Strip Extrusion iyo madaxa strainer.
2 foosto wuxuu ka kooban yahay dhowr aag. In zong quudinta, boosaska loogu aarayo la duub dhanka shaqeeyaan si kor loogu qaado awoodda quudinta. In plastication iyo extrusion aagagga, tirada kala duwan ee biinanka waa foosto fitted.The waa qaab-dhismeedka biraha dual iyo caajisaan circumferentially.
3 qalab fur waxaa uu aqbalayaa 38CrMOALA steel daawaha, ka dib markii demin iyo tempering, qaabeynta, tayo, darane sax, dusha bimetal buufiyo nitriding, qiraan, iwm, la feature ee sax sare, daxalka sare ka hortag ah, Duugga sare u adkaysta. Nolosha adeeg fur waa double daba dheeraaday.
maaddadu ay tahay: 38CrMOALA
Degree camal : HB240 ° ~ 280 °
Engegnaantiinna Nitriding : HV850 ° ~ 1000 °
Carradu hoos Nitriding : 0.45 ~ 0.7mm
Roughness dusha : Ra0.4
Ku marooji toosnaanta : 0.015mm
Hard Chrome dahaadhay ka dib markii Nitriding : ≥900HV
Chrome dhumucdiisuna : 0.05 ~ 0.10mm
Alloys laba-waji : HRC56 ° ~ 65 ° ( daawaha nickel-saldhig )
Daawaha carradu : 1.5 ~ 2.0mm
4 geerka in reducer waxaa lagu sameeyey bir daawaha, ilkaha waa mid aad u adag.
Gear la qodaa wax soo saarka godkii for fur qaboojinta kastoo Rotary Joint.
5 kululaynta iyo nidaamka qaboojinta, kululeeyaha dhinta (caaryada controler heerkulka).
6 Speed Constant ama drive xawaaraha Doorsoome sida looga baahan yahay gaar ah.
Motor: inta jeer motor gacanta ku xawaaraha ama DC motor.
7 Faa'iidooyinka mishiinka waxaa ka mid ah natiijada plastication fiican, awood extrusion sare, heerkulka hoose ee caag ah xilka iyo shaqada siman, qalliin fudud iyo dayactirka.
8 Waa loo isticmaalo in extruding tuubada caag, tuubooyinka caag, sheet caag, dalaka hoose, shaabadihiisa, cable silig, galkeeda, cag taayirrada, dhinaca taayirrada derbiga, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu siiyo caag for calender size yar yar.
Halbeegyada Technical lagu daydo oo waaweyn:
Ku marooji dia mm 90 120 150 200 250
L / D Saamiga 12-14 12-14 16 12-18 12-18
Max.Screw xawaaraha r / min 60 55 45 33 26
QTY Row of pin 8 10 10 12 12
Pin QTY of taxane kasta 6 6 8 10 12
Power sahayda 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ
Zone ee wareegga biyaha kulul 4 4 4 4 4
cabbir Guud L mm 2570 3010 4000 7250 7980
About miisaanka t ~ 4.5 ~ 6 ~ 7.25 ~ 12 ~ 17
Haddii aad qabto in aad shuruud gaar ah, fadlan nala soo xiriir. Waxaan sidoo kale u astaysto mashiinka sida baahida khaaska ah.
Previous: C Nooca Rubber Daaweynta Press Machine
Next: Feed Hot Rubber Extruding Machine
extruder caag qabow
Mashiinka extruder caag
extruder caag banjarin
Filter Rubber strainer Extruder Machine
Duritaanka BMC Xaydha fudud Glass Fiber cusbi Mol ...
PVC Steel Wire xoojiyeen tubbo Extruding Line
Small Haydarooliga Rubber Vulcanizer Machine